Nilaza i Ross Young fa ho hitantsika ny mini-LED 27-inch iMac amin'ny fiandohan'ny taona 2022 | Avy amin'ny mac aho
Nilaza i Ross Young fa hahita mini-LED 27-inch mini iMac isika amin'ny fiandohan'ny 2022
Ross tanora, Tale jeneralin'ny Consultant Chain Supply dia nanitsy ny heviny teo aloha tao amin'ny tambajotra sosialy Twitter natomboka andro vitsy lasa izay. Raha izany dia MacRumors dia manako ny fanitsiana an'i Young amin'ny fivarotana malaza.
Amin'ity tranga ity, ny fampisehoana 27-inch ho an'ny iMac dia hanasongadinana taratra mini-LED, izay mety midika fa hanampy ny fanondroana XDR hitantsika tamin'ny MacBook Pros 14-inch sy 16-inch vaovao vao tsy ela akory izay. Araka an'i Young, Apple dia mikasa ny handefa ny iMac vaovao amin'ity tabilao ity amin'ny telovolana voalohany amin'ny 2022.
Ilay bitsika izay ahitsinao ny fanamarihana nataonao teo aloha Nilaza i Apple fa mikasa ny hamoaka monitor ivelany Amin'ireto endri-javatra izay manampy ny iMac 27-inch izao dia izao manaraka izao:
OK, nibitsika aloha loatra. Ny efijery 27 ″ MiniLED dia mandeha amin'ny iMac amin'ny Q1'22, fa tsy mpanara-maso ivelany. Mety hahita mpanara-maso any aoriana. Mbola 24Hz - famerenana miovaova 120Hz… Miala tsiny amin'ny fisavoritahana!
- Ross Young (@DSCCRoss) Oktobra 20, 2021
Azontsika atao ny manatsoaka hevitra fa ny vinavinan'ny fandefasana efijery dia nisy lesoka ary tamin'ity tranga ity dia 27 iMac miaraka amin'ny ProMotion, izay mamela ny tahan'ny famelomana indray mandeha eo anelanelan'ny 24Hz sy 120Hz hanatsarana ny fahombiazan'ny fitaovana. Young dia tsy manondro izay ho vahaolana amin'ny efijery amin'ity maodely iMac vaovao ity izay ho avy ary izany ve ny maodely 27-inch amin'izao fotoana izao dia manana vahaolana 5K ary tena tsara izany. Angamba ny mpanara-maso noresahin'i Young dia ho tonga amin'ny faran'ny taona ho avy izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » iMac » Nilaza i Ross Young fa hahita mini-LED 27-inch mini iMac isika amin'ny fiandohan'ny 2022
Nomad nandefa ny raharaha Modern Leather ho an'ny AirPods 3
Kup dia nilaza fa ny fanamboarana solomaso AR dia nihemotra hatramin'ny faran'ny 2022